SAWIRRO: Gattusso & Cannavaro oo Koobka Talyaaniga Roma geeyay! (Magaalooyinka lagu ciyaari dooni Super Coppa-ha oo la sheegay!) – Gool FM
(Roma) 02 Maajo 2016 – Labada halyeey ee Talyaaniga u qaaday KA2006 ee Rino Gattuso iyo Fabio Cannavaro, ayaa Koobka Talyaaniga u gelbiyey magaalada Roma oo ay 21-ka bishan ku ballansan yihiin kooxaha AC Milan vs Juventus.
Labada laacib oo sidey koobka oo lagu heeryey midabada kooxaha AC Milan iyo Juve ee casaanka iyo Caddaanka ayaa waxaa la guud maray guulihii ay kooxohooda la gaareen ee isla koobkan, koobab kale oo maxalli ah iyo dabcan Koobka Adduunka.
Dhanka kale, Lega Serie A ayaa miiska soo saaray magaalooyinka bisha Diseembar u sharraxan inay martigeliyaan Super Coppa Italianna oo dhexmari doona isla AC Milan vs Juventus iyadoo la dheeli doono Boxing Day-ga, waxaana magaalooyinka ugu horreeysa Duba, Dooxa iyo Beijing ama Shanghai.
Taageerayaasha Leicester City maxay qorshaynayaan inay ka sameeyaan magaaladooda, haddii ay kooxdoodu caawa ku guulaysato Premier League?